Oyena Mvelisi weNdibano yePCB eJika ngokukhawuleza – PCBFuture - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Oyena Mvelisi weNdibano yePCB eJika ngokukhawuleza – PCBFuture
Yintoni indibano yePCB ekhawulezayo yokujika?
Ukujika ngokukhawuleza indibano yePCB ngumenzi wokubonelela ngokukhawulezaiibhodi zesekethe eziprintiweyo labantuinkonzo.Ngophuhliso olukhawulezayo loshishino lwe-elektroniki, kukho abathengi abangakumbi nangakumbi banemfuno enkulu yokujika ngokukhawuleza kwendibano yePCB.
Indibano ekhawulezayo yokuguqula iPCB ibenza bahlale benolwazi ngeendlela ezintsha zemarike kwaye bahambisane nabakhuphisana nabo.Nangona kunjalo, abathengi kufuneka baqonde into yokuba kufuneka kubekho inkampani ethembekileyo, enamava kunye neendleko ezifanelekileyo ukuhlangabezana neemfuno zabo zendibano yePCB ekhawulezayo, eya kubenza bagqibezele iiprojekthi eziphambili ngexesha elibekiweyo.
Nanini na xa ufuna iindibano zebhodi yesiphaluka ezikhawulezayo, ezinomthamo ophantsi okanye ongumzekelo oprintiweyo, ayikho enye inkampani enokubonelela ngeendibano ezithembekileyo nezichanekileyo njengoko zisenza iiNdibano eziKhawulezileyo.Sinceda abathengi bethu banciphise umjikelo wophuhliso lwemveliso, kwaye sibancede baphephe ukusebenzisa iibhodi ezidityaniswa ngesandla ngamagcisa angaphakathi.Siqinisekisa ukuhanjiswa kwangethuba kweendibano zePCB ezithembekileyo ezikhawulezayo zokujika zeprototypes, imveliso yebhetshi encinci kunye nomthamo wemveliso entsha (NPI).
Kutheni sifuna ukujika ngokukhawuleza inkonzo yendibano yePCB?
1. Nciphisa ixesha lokuthengisa
Inkqubo yendibano yomfuziselo we-PCB kwi-PCBFuture, inkqubo yendibano ilandela ezona ndlela zilungileyo njengenkonzo yethu epheleleyo ye-PCB yokujika.Ukususela kuyilo lokuqala kunye nokuphononongwa kwesakhiwo ukuya ekukhethweni nasekuthengeni awona macandelo angcono, indibano yeprototype kunye novavanyo, injongo yethu kukukunceda ufezekise ukwenzeka kwentengiso ngelixa unciphisa ixesha lokuvelisa kunye neendleko.
2. Nciphisa iindleko
Inzuzo ephambili yokujika ngokukhawuleza kwendibano yePCB kukonga iindleko.Ngokucuthwa kwexesha lemveliso, iindleko zePCB nganye ziya kuncitshiswa kakhulu.Ngaphezu koko, ixabiso lilonke lokuthenga amacandelo ngexabiso elisebenzayo usebenzisa i-assembler ethembekileyo idla ngokuncitshiswa.
3. Ixesha elicebileyo lokuvavanya imveliso
Ukujika ngokukhawuleza indibano yePCB inokubonelela ngomgangatho, ukuchaneka kunye nokonga kweendleko.Ngophononongo olululo, uyilo lwabo lunokwenzeka ukuqinisekisa amava agqwesileyo kwaye uthintele nakuphi na ukuphinda kusetyenzwe ngexabiso eliphezulu kunye nokulibaziseka kweemarike.Abavelisi bazibophelele ekucutheni ixesha lemveliso.
4. Olona khetho lusebenzayo
Kubalulekile ukukhetha ukhetho olunoqoqosho kakhulu lokuphuhlisa iimveliso.Ukusuka kulo mbono jika ngokukhawuleza, inkonzo yendibano yePCB inokusingatha yonke inkqubo.Oku kuya kwenza lula ulungiselelo oluntsonkothileyo kunye nenkqubo yophuhliso lwemveliso kuyo yonke inkqubo yemveliso.Iya kuba sisigqibo esinenzuzo kuba sinciphisa ithuba lokuphinda kusetyenzwe kwakhona.
Iingxaki eziphambili esijongene nazo xa sifuna indibano yePCB ejika ngokukhawuleza?
1. Abavelisi abaninzi abazange bafune ukubonelela ngeenkonzo zendibano ye-elektroniki ye-prototype ngenxa yokuba inani le-odolo lincinci.
2. Umenzi wendibano ye-elektroniki akakwazanga uku-odola onke amacandelo afunekayo kunye nepharamitha efanayo.
3. Abakwazanga ukufumana ixabiso eliphantsi iinkampani indibano pcb xa kuthelekiswa ukuhlanganisa i-PCBs prototype ngokwabo
4. Umenzi we-PCBA akazange aqeqeshe ngokwaneleyo, akakwazanga ukuhlanganisa iimveliso zabo ngomgangatho ophezulu.
PCBfuture zijolise ukuphelisa ezi kunye nokubonelela umgangatho ophezulu kunye neendleko eziphantsi ngokukhawulezaindibano PCB turnkeyinkonzo.
I-PCBfuture inamava atyebileyo okuvelisa i-prototype kunye ne-PCBs yevolumu ephantsi ukuya kwephakathi kwaye ibe neqela lendibano elinamava ukuqinisekisa ukuba indibano yakho ye-PCB ngokukhawuleza.Amaxesha ethu okukhokela indibano yePCB yeturnkey ngawona mafutshane kushishino, ngokukhawuleza sithumela ii-PCBs ezidityanisiweyo kubathengi bethu ngeentsuku ezi-3.
Kutheni ukhetha i-PCBFuture yenkonzo yakho yendibano ye-PCB yokujika ngokukhawuleza?
1.PCB Prototyping ngokukhawuleza kwiiyure ezingama-24
I-PCBfuture qalisa ishishini ukusuka kwimveliso ye-PCB, sinamandla okuqina e-PCB ukuhlangabezana nemihla ebekiweyo yeprojekthi yakho.Kuba Single icala PCB / Double icala PCB kunye 4 umaleko PCB, thina fastest inokuvelisa ngaphandle kwiiyure ezingama-24.
2.Ukufumana izixhobo ze-elektroniki ngokukhawuleza
PCBfuture baye ukwakha ubudlelwane intsebenziswano olomeleleyo kunye abasasazi amacandelo odumileyo ehlabathini ezifana Digi-Key, Arrow, Mouse, Avnet, kunye Chip enye stop njl. Kwakhona siye saseka intsebenziswano yobuchule kunye arhente ephambili abenzi amacandelo yokuqala.Ngaphezu koko, sine-inventri etyebileyo yezinto ezininzi ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo.Oko kuqinisekisa ukuba sinokulungiselela izixhobo ze-elektroniki ezikumgangatho ophezulu ngexabiso elifanelekileyo kunye nexesha lokukhokela.
3.Iinkonzo zokuhlanganisa izixhobo zombane ezikhawulezayo
Ngokusebenzisa i-SMT enobugocigoci nephucukileyo kwaye Ngoomatshini bemingxuma, siyakwazi ukudibanisa iindidi ezahlukeneyo zee-PCB ezinobuchwephesha obuphosiweyo ngokukhawuleza.Eyahlukileyo kunye nabavelisi abaninzi beNdibano yePCB, sineqela elizinikeleyo kunye nemigca yendibano ye-SMT enoxanduva lokujika ngokukhawuleza kwindibano yePCB kunyeindibano yeprototype pcbimiyalelo.
Ukusuka kwiikowuti ezikhawulezayo zesiko ngokweemfuno zakho, ukwenziwa kwePCB, ukufunwa kweMicimbi, iNdibano ye-SMT, iNdibano ye-DIP, uvavanyo kunye nokuthunyelwa, qhubela phambili ukuya kwinyathelo lesibini njalo njalo.SineQela le-PMC elinyanisekileyo lokulandela inkqubo kwaye siqinisekise ukuba sinokuthumela iibhodi kubathengi ngexesha.
Ngokusekwe kwimveliso egqwesileyo yePCB kunye nenkxaso ethembekileyo yokujika ngokukhawuleza, sinokuqinisekisa ukuba unokufumana iinkonzo ezanelisayo zendibano ye-elektroniki.Sijonge phambili ekusebenzeni nawe kwiiprojekthi zendibano yePCB.Ngolwazi oluthe vetshe, nceda uthumele i-imeyile ku-service@pcbfuture.com.
I-FQA yokuJika ngokukhawuleza iNdibano yePCB
1. Ukhawuleza kangakanani ukusinika ucaphulo olukhawulezayo lwendibano yePCB?
We fastest can quote to PCB assembly in 1 hours, and for turnkey PCB assembly service, we fastest can quote to you in 4 hours .
2. Ngaba unokubonelela ngeprototype ekhawulezayo yokujika indibano yePCB?
Ewe, sinokunikezela ngenkonzo yomfuziselo wePCB ngokukhawuleza.
3. Ungawafumana amacandelo endibano yam?
Ngokuqinisekileyo.Ungathembela kuthi kwindibano ye-turnkey.
4. Uwaphatha njani amalungu angasetyenziswanga?
Amalungu angasetyenziswanga angathunyelwa kuwe okanye agcinwe nathi ngeodolo yakho elandelayo.
5. Ingaba i-PCB yakho idibanisa i-ROHS ekhawulezayo iyahambelana?
6. Zeziphi iziqendu ezahlukileyo zomphezulu ozilungiselela ukujika ngokukhawuleza kwePCB?
Sinikezela ngokugqitywa komphezulu kulandelayo:
Ÿ Umgangatho weSoda yoMoya oshushu (HASL)
Ÿ I-HASL engenalo lead
Ÿ Igolide yokuntywiliselwa kweNickel engenaMbane (ENIG)
Ÿ Ukuntywiliselwa kwiSilivere njl.njl.
7. Zeziphi iibhodi ezahlukeneyo ozilungiselela indibano yebhodi yesiphaluka ekhawulezayo eprintiweyo?
Sijongana neebhodi eziqinileyo, eziguquguqukayo kunye ne-rigid-flex kwiileya ezininzi.
8. Ngaba ujongana neentlobo ezahlukeneyo zendibano yePCB ekhawulezayo?
Ewe, sinikezela ngoku kulandelayo:
Ÿ Umngxuma womngxuma
Ÿ INtaba yoMphezulu (SMT)
Ÿ Ubuchwephesha obuxubeneyo (Umngxunya/uhlobo oluxutyiweyo)